Resham, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
HOME » Resham
काठमाडौं । पति रेशम चौधरीको सपथ समारोहमा साक्षी हुन पत्नी रञ्जिता चौधरी सिंहदरबार पुगेकी थिइन्। रञ्जितासँग छोरा पनि साथ थिए।
ढाकाको कुर्ता सुरूवाल र टोपीमा कालो चस्मा लगाएका रेशम चौधरी बेहुला जस्ता देखिन्थे। सपथको समय उनले छोरा काखमा लिएर कुराकानी गरे। पत्नी रञ्जिता पनि सँगै थिइन्।
सपथ हुने हलमा रेशमलाई राजपा नेताहरूले न्यानो स्वागत गरे। केहीबेरमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा हलमा प्रवेश गरे। उनले रेशमसँग कसिलो ुहेन्सेकु गरे। त्यसपछि सुरू भयो सपथ प्रकृया।
सभामुख महराले नेपालीमा लेखिएको सपथ पत्र वाचन गरे भने रेशमले थारू भाषामा उल्था गरेर सपथ ग्रहण गरे।
सपथ पछि सांसदको प्रमाणपत्र र लोगो ग्रहण गरे। त्यसपछि खादा, माला र अविरले रेशम रंगिए।
कुनै चलचित्रको दृश्य जस्तो लाग्ने यो घटनाक्रम उनकी पत्नी र छोराले हसिलो अनुहार बनाएर हेर्दै थिए।
तर केहीबेरमै कहानी वियोगान्ततर्फ मोडियो। सपथ पछि प्रहरी भ्यान चढेर रेशम जानुपर्ने थियो डिल्लीबजार कारागार, जहाँबाट उनी उही भ्यान चढेर कडा सुरूक्षाबीच सिंहदरबार आएका थिए।
प्रहरी भ्यान चढेर रेशमलाई कारागारतर्फ लैजाँदै गर्दा पत्नी रञ्जिता र छोराको मुहार मलिन बन्यो। प्रहरी र मिडियाको भीडमा घेरिएका रेशमले पत्नी र छोरालाई विदाइ हात हल्लाउन पाएनन्।
रेशम चढेको प्रहरी भ्यान कारागार गन्तव्य बनाएर हुँइकियो। पत्नी र छोरा मिडियाबाट घेरिए। गह्रुङ्गो मन बनाएकी रञ्जिताले अनुहारमा खुसी भाव उतार्ने पूरै प्रयास गरिन्। सायद आमाको अनुहारमा उत्रिएको बनावटी नै सही त्यही प्रशन्नताले छोरालाई पनि सम्हालिन सजिलो बनायो।
रञ्जिताले सपथको यो अवसरले आफूहरू प्रशन्न भएको बताइन्। कैलालीका जनता जसले रेशमलाई भारी मतले विजयी बनाएका थिए उनीहरूप्रति रञ्जिताले कृतज्ञता सुनाइन् र सरकारलाई पनि सपथ गराउने पहलका लागि आभार व्यक्त गरिन्।